We.com.mm - RS တစ်ခုမှာ ငွေကြေးမပြည့်စုံတော့တဲ့အခါ ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ
RS တစ်ခုမှာ ငွေကြေးမပြည့်စုံတော့တဲ့အခါ ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ
အချစ်တစ်ခုမှ ငွေကြေးချမ်းသာမှုတွေ မလိုအပ်ဘူးလို့တော်တော်များများက ပြောကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ အာ့လိုတွေ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကိုယ့်မှာ ငွေကြေးမပြည့်စုံလို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အစပိုင်းမှာတော့ နားလည်မှုတွေ ထားပေးခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းတော့ တဖြေးဖြေးနဲ့အဖုအထစ်လေးတွေ ဖြစ်လာတက်ပါတယ်။ အခြားချစ်သူတွေ Anniversary day တွေမှာ ဟိုလို Surprise လုပ်ပေး ဒီလို Surprise လုပ်ပေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်မှာတော့ အခြားသူတွေကို ကြည့်ပြီးအားကျနေရသလို တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ထဲမှာလည်း အားငယ်စိတ်ဝင်ပြီး ဝမ်းနည်းနေတက်ပါတယ်။ ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေမယ့် အချိန်မှာ ဘာတွေလုပ်ကြမလည်း
၁. အဓိက ကတော့ ပိုက်ဆံကို ချွေချွေတာတာ သုံးရမယ်။ ကုန်သင့်တဲ့ နေရာမှာပဲ ကုန်ပြီး မကုန်သင့်တဲ့ နေရာမှ မကုန်ဖို့ပါ။
၂. တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အရင်ကလိုပဲ နားလည်မှုတွေ ထားရှိပေးပါ။ ( ဥပမာ- ကိုယ် ကျောင်းကနေအိမ်ကို ပြန်ရမှာ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေတဲ့ အချိန် သူ့မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့်ဆီမလာနိုင်တဲ့ အခါတွေမှာ ပြတ်မယ့်စကားတွေကို မပြောပဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မသိလိုက်မသိဖာသာနေပြီး အရင်လိုပဲနားလည်းပေးလိုက်ပါ.) ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲကြောင့် သူမလာနိုင်တဲ့ အချိန်တွေမှာ တော့ ကိုယ့်ဘက်ကနေ လမ်းခွဲစကားပြောလိုက်ရင် သူ့အတွက် စိတ်မကောင်းစရာတွေ ဖြစ်နေမှာပါ။
၃. အခြားတွေကို ကြည့်ပြီး ခဏခဏ အားမကျပါနဲ့နော်။ ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့သူ့အခြေအနေက တူချင်မှ တူမှာလေ။ မဟုတ်ဘူးလား။ ငွေရှိတာနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရတယ်ဆိုပေမယ့် အဲဒီ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေက ခဏတာလေ။ အဓိကကတော့ ငွေကြေး ပြည့်စုံဖို့ထက် ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်ဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေနဲ့ သစ္စာရှိရှိ ချစ်ကြဖို့ပါပဲ။ နောက်ပိုင်း မှာ နှစ်ယောက်စလုံး လိမ္မာမှ နောင်အနာဂတ် အချစ်ရေးလေးကလည်း အဆင်ပြေနေမှာပါနော်။
ခွေးမွေးထားတဲ့ကောင်လေးတွေကို ချစ်သူတော်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း
ဘယ်ရာသီဖွားက ဘယ်နေရာမှာ ချိန်းတွေ့ရတာကို ကြိုက်တတ်လဲ?
စက်လှေကားရဲ့ဘေးမှာ ဘာလို့ဘရက်ရှ်လေးတွေ ပါနေတာလဲ